घरदैलोको सरकार टाढा किन ? « Phidim Today
घरदैलोको सरकार टाढा किन ?
Published on: 8 September, 2019 2:22 pm
हामी संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्थाको अभ्यासमा छाँै । हामीले अपनाएको शासन प्रणाली संघिय शासन हो । यो प्रणालिको आधारभूत तह स्थानिय तह हुन । यो नागरिकको घर दैलोको सरकार हो । अरु दुई तहका सरकार यसका परिपुरक हुन । नत माथीका हुन । नत तलका नै हुन । सवै तह समान हुन । संविधानले छुट्टा छुट्टै अनुसुचिमा यिनका अधिकार निर्धारण गरि तोकिएको छ । यिनिहरुको अन्तर सम्बन्ध, अन्तरनिर्भरता, सहकार्य, समन्वय र परिपुरकता समेतको ब्याख्या र ब्यवस्था समेत संविधानमा उल्लेख छ ।
हाम्रा स्थानीय तहहरुको गठन भई निर्वा्चित जनप्रतिनिधिलाई सुम्पिएको करिव अढाई बर्ष पुरा भएको छ । तीन गाँउरनगर सभा सम्पन्न भएका छन । दुई आर्थिक बर्ष पुर्ण रुपमा गुजारी सकेका छन । करिव स्थानियबासीले यिनका कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन थालिसकेका छन । तर यि कार्य सम्पादन जन अपेक्षा अनुसार भए वा भएनन् त्यसको लेखाजोखा कसले गर्ने ? हिजोको अभ्यासमा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत वित्तिय आयोगले सवै स्थानीय निकाय (गाविस, जिविस र नगरपालिका र विषयगत कार्यलय समेत) को कार्यसम्पादन मूल्याङकन गर्दथ्यो । न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन मूल्याङन हुने गर्दथ्यो । सफल, असफल खुट्याईन्थ्यो । स्थानीय निकायको बजेट बाँडफाँडमा यसको भूमिका हुन्थ्यो । उनिहरुको जवादेहिता खोजिन्थ्यो । जवाफदेहि वनाउन यसको अभ्यास धेरै हद सम्म सार्थक समेत थियो । साथै सामाजिक परिक्षणका माध्यमबाट समेत उपलब्धिको लेखाजोखा गरिन्थ्यो । चुनौति र कठिनाईको पहिचान गरिन्थ्यो । सम्भाब्यताको खोजि हुन्थो ।
अर्को तर्फ हरेक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाई वा नागरिक सुनुवाई गरिन्थ्यो । नागरिकले भेला भएर सुझाव एवं गुनासो राख्थे, राख्ने मौका पाउथे । राज्य संयन्त्रका धेरै अनियमिता एवं बेथिति बाहिर आउथे । नागरिकका बोलि र जनदवाबबाट उनिहरुको कार्यसम्पादनमा सुधार आँउथ्थो । कतिपय अनियमिता एव भष्ट्रचारहरु बाहिर आएर कावार्हिको प्रक्रियामा समेत जान्थे ।
तर हामीले आज जे अभ्यास गर्दैछौ यो कता कता पश्चगामी भएको अनुभूती भईरहेको छ । हाम्रा व्यवहारले शासन प्रणालिनै दोषपूर्ण हो कि भन्ने सन्देश आम सर्वसाधारणमा गईरहेको देखिन्छ । के यो शासन प्रणालीमा हाम्रा स्थानीय सरकार यि सवै कर्तब्य र जिम्मेवारी बाट मुक्त हुन ? के उनिहरुले गरेका कार्य सम्पादन आफ्ना नागरिकलाई सुनुवाई गर्नु पर्दैन ? नागरिकका भावना, सुझाव र गुनाँसा के छन्, के हुन भन्ने जानकारी लिनु पर्दैन ? आफ्नो कार्यसम्पादनलाई गाँउबासी एवं नगरबासीले कसरी महशुस गरिरहेका छन र नागरिकले हिजो दीएको अभिमतलाई हामीले सम्मान एवं न्याय गरेका छौ वा छैनौ यसको जवाफ र सुचना लिनु पर्दैन ? आदी धेरै प्रश्नहरु उठेका छन् र उठाउन आवश्यक छ । जसको निदानका लागि सुशासनका केहि विधि किन नअपनाउने ?
वितेको २ आर्थिक बर्ष भित्र पाँचथरका ८ स्थानीय तह मध्ये ३ वटा गाँउपालिका तुम्बेवा, फालेलुङ र हिलिहाङ गाँउपालिकाले यस आ.ब.को समाप्ती पछाडी सार्वजनिक सुनुवाई गरेको पाईयो । भलै यो सार्वजनिक सुनुवाई विधि र प्रक्रिया संगत नभएपनि स्थानीय नागरिकलाई आफ्नो विचार, सुझाव र गुनासो राख्ने मौका दियो, यसलाई सकरात्मक रुपमै लिनु पर्दछ । आगामि दिनमा यि पालिकाले विधि र प्रक्रियालाई पूर्ण रुपले पालन गरोस । कम्तिमा आफ्नो कार्यसम्पादन तेश्रो पक्षबाट लेखाजोखा गराओस । वा मोडोरेटर मार्फत लेखाजोखा गरि सार्वजनिक गरोस । संगसगै स्थानीय अखवार वा विधुतिय माध्यम वा आफनो अफिसियल बेभ पेजमा सार्वजानिक समेत गरोस । यस विषयमा स्थानीय जन प्रतिनिधि संग अनौपचारिक गफगाफ हुदाँ यि प्रक्रियामा जादाँ नागरिकले अनावश्यक अलोचना गर्छन । त्यहि भयले नगरेको भन्ने सुनिन्छ । यो विचारसँग सहमत हुन सकिन्न किनकि नागरिकका बुझाई स्वभावैले फरक होलान् वा रहलान् । उनिहरुको जिज्ञासा, गुनासो राख्ने र तपाई माथि बार–बार प्रश्न गर्ने अधिकार नागरिकको हो । नागरिकले बोलेनन् भने हाम्रा स्थानीय तह कमजोर हुन्छन् । जति बोले त्यति स्थानीय तह बलिया हुन्छन् । सुशासन उन्मुख रहन्छन ।
अन्त्यमा, स्थानीय तहहरु आफ्नो कार्यविधि आफै तय गर्न सार्वभौम छन् । उनिहरुले सार्वजनिक सुनुवाई र सामाजिक परिक्षणको कार्यविधि आफै निर्माण गर्न सक्छन । बर्षमा कति पटक सुनुवाई गर्ने, कसरी गर्ने, कुन निकाय वा पक्ष द्वारा गराउने यि तमाम विषय आफै तय गर्न सक्छन । अरु सुनुवाईका विधिहरु समेत विकास गर्न सक्छन । सुनुवाईका लागि फेसबुक लाईभ देखि अन्य सञ्चारका माध्यम समेतको प्रभावकारी उपयोग हुन सक्छ । यसमा विलम्ब नगरियोस ।
फाल्गुनन्द जन्म जयन्ति
महेन्द्रले पत्याएका मान्छे
पर्यटन विकासका लागी
रेडियो रिपोर्टले जिल्ला संयोजक पद नै चट
लोप भएका केहि लिम्बु संस्कार संस्कृतिहरु
व्यवासयिक विकासका सवाल